သင်၏ငါးမွေးမြူရေးအတွက်အဓိကအသုံးအဆောင် ၅ ခု ငါး၏
သင်ငါးမွေးမြူရေးလောကတွင်စတင်သောအခါသင်သည်သင်၏ငါးများအတွက်အချို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ငါး၊ ငါးမွေးကန်နှင့်ရေကိုဝယ်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ၊ extras အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ဒီ post မှာတော့မင်းတို့ဟာဘာတွေလဲဆိုတာမင်းတို့ကိုပြမယ် သင်၏ငါးမွေးကန်အတွက်အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အဘယ်သို့သိုထားရမည်ကို၎င်း၊
သငျသညျဤအပိုဆောင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စစ်ဆင်ရေးကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ဤသည်သင်၏ post 🙂
ငါးသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ရန်အလျင်လိုခြင်းမပြုမီလိုအပ်သောအရာကိုကောင်းစွာသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောအချို့ရှိသော်လည်းငါးမွေးမြူရေးတစ်ခုစီ၏လိုအပ်ချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အရ သင်မိတ်ဆက်မည့်ငါးအမျိုးအစားများ၊ ငါးအရွယ်အစား၊ ရေနေအပင်များ၊ စသည်တို့ သူတို့ကအချို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားသူများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးသိရတာကငါတို့ငါးမွေးကန်ထဲမှာငါတို့သွားမဲ့ငါးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲ။ ရေငန်ငါးများနှင့်မတူပါ။ ရေအေးမှအခြားသူများထက်အပူပိုင်းဒေသငါးများကိုလည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အချို့မှာအစစ်အမှန်အပင်များလိုအပ်ပြီးအချို့သောအလှဆင်ပလပ်စတစ်များဖြင့်အချို့သောသူများသည်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်။
ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်သော်လူများစွာသည်မရေမတွက်နိုင်သောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဗေဒတိုးမြှင့်ဖို့။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်မလိုအပ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ငါးများ၏ရေကူးရာနေရာ၊ အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံများကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာငါးမွေးကန်သည်အမြဲသပ်သပ်ရပ်ရပ်သန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိရင်တောင်အဲဒါကိုဆိုးဆိုးရွားရွားဂရုစိုက်နေပုံရတယ်။
နောက်ငါးတစ်ကောင်သည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အသုံးအဆောင်စာရင်းကိုရေးပြီးသင့်အားငါးကိုဂရုစိုက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကျန်အပိုပစ္စည်းများသည်အလှဆင်ရုံမျှသာဖြစ်ပြီးအသုံး ၀ င်သည့်မည်သည့်အရာမျှမပေးနိုင်ပါ။
ICA OP600 အတွင်းပိုင်းစစ်ထုတ်စက် ...
NICREW အတွက်စစ်ထုတ်သည် ...
ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။သူတို့ငါးမွေးကန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးများအသက်ရှင်နိုင်စေရန်လိုအပ်သောအခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ စစ်ထုတ်သည့်အရာများ သူတို့ကဖြစ်ပေါ်လာသောအကြွင်းအကျန်များ၏ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည် နှင့် floating ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ငါးမျှားရန်နေရာရှိရေကိုငါးကျန်းမာစေရန်အတွက်သန့်ရှင်းစွာထားရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကအစဇီဝဗေဒစစ်ထုတ်ခြင်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အစေခံ။ ဆိုလိုသည်မှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်ငါးကိုအကျိုးပြုသောဘက်တီးရီးယားများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
စစ်ထုတ်ကိရိယာများအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ ဇီဝဗေဒ, စက်မှုနှင့်ဓာတု filtration ။ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းအမျိုးအစားနှင့်အတူငါးမွေးကန်အားကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ထားရန်လုံလောက်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသီးသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ဒီရွေးချယ်မှုကပိုစျေးကြီးပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုလိုတယ်။ သို့သျောလညျး၎င်းငျးသညျကြှနျုပျတို့လိုအပျရာကိုရှေးခယျြရာတှငျပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့လျှင်တစ်ခုတည်းကိုသာအစားထိုးနိုင်သည်။
အတွက် Hygger အပူပေးစက် ...
BPS ရေအောက်အပူပေးစက် ...
ငါးများစွာသည်သူတို့၏အပူပိုင်းဒေသကျက်စားရာနေရာများ၏သဘာဝအခြေအနေကိုတုပရန်ပိုမိုပူနွေးသောရေလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးကိုကျန်းမာစေလိုလျှင်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ အပူပေးစက်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ အများဆုံးထောက်ခံချက်ရှိသည်သောသူတို့အားဖြစ်ကြသည် အော်တိုအပူချိန်စည်းမျဉ်း။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ငါးသည်လိုအပ်သောအပူချိန်ကိုရွေးချယ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်သောရှုထောင့် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါးမွေးကန်ရှိရေပမာဏနှင့်အတူအစေခံနိုင်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုကြီးတဲ့ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ဖို့အမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်၊ ဒါကတိုတိုမကျဖို့နဲ့ရေအားလုံးကိုအပူမပေးဖို့။
NICREW Classic LED မီး ...
NICREW အဖြူရောင်အလင်းရောင် ...
BPS အဖြူရောင်/အပြာ LED မီး...
အလင်းရောင်သည်နေရောင်ခြည်ကိုတုပရာတွင်အသုံးပြုသည်သာမကပိုမိုကောင်းမွန်သောလှပသောသွင်ပြင်ကိုရရှိစေသည်။ မတူညီသောမီးခွက်များရှိသည်။ fluorescent tubes များမှအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသော led led strips and lamp ကိုင်ဆောင်သူများအထိ။
အလင်းရောင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတင်းကျပ်သောပုံစံဖြင့်မလိုက်ဖက်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အရသာရှိသောကိစ္စဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောအလင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုရမည်ဟုညွှန်ပြသည့်ပုံစံရှိသည် ရေလီတာလျှင် 30 lumens ။
အလင်း၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်မှာအရောင်နှင့်ပြင်းထန်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သဘာဝရေနေသတ္တဝါများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားသဘာဝအလင်းပေးသောအလင်းလိုအပ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောပြင်းထန်မှုသည်နေရောင်ခြည်နှင့်မတူသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။ အလင်း၏ပြင်းထန်မှုမြင့်လေလေ၊ အပင်ကြီးထွားလေလေဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့သည်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
bedee Oxygenator ငါးမွေးကန်၊
ဤရွေ့ကားရေ၏လေထုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အစေခံသောငါးမွေးကန်ထဲတွင်ထားရှိနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်, ငါးနှင့်အပင်များ၏သက်တမ်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။ ငါးများနှင့်ရေနေအပင်များအသက်ရှင်ရန်ရေထဲမှာအောက်စီဂျင်ပမာဏကိုလိုအပ်သည်။ ရေပြောင်းလဲခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အပင်များဖြင့်ရေသည်အောက်ဆီဂျင်ရရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ဘူး၊ ငါသိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ် aerators လိုအပ်ပါတယ်.
Nekano ရေကူးကန် pH မီတာ...
များသောအားဖြင့်ငါးများသည်သေတတ်ကြပြီးအဘယ်ကြောင့်မသိရပါ။ သင့်မှာအထက်ဖော်ပြပါဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးရှိနေရင်တောင်သင်ဟာရေအရင်းအမြစ်ကိုသိရမယ်။ ဒီအဘို့အရေစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်။
pH တန်ဖိုး (pH)၊ စုစုပေါင်းမာကျောမှု (GH)၊ ကာဗွန်နိတ်တင်းကျပ်မှု (KH)၊ အမိုးနီးယား / အမိုးနီးယား (NH4 / NH3)၊ နိုက်ထရိတ် (NO2)၊ နိုက်ထရိတ် (NO3)၊ ဖော့စဖိတ် (PO4)၊ ။
por နာတာလီယာ ချယ်ရီ လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
ငါးပြတိုက်များအတွက် CO2 သည်အစအနများစွာပါ ၀ င်ပြီးတောင်းဆိုမှုအရှိဆုံးငါးမွေးမြူရေးသမားများအတွက်သာအကြံပြုသည်။
ကျောပိုးအိတ် filter များသည်ငါးပြတိုက်တစ်ခု၊ အကြီး (သို့) အငယ်အတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်လျှင်အရေးမကြီးပါ။
AquaClear filter များသည်ငါးပြတိုက်လောကတွင်ခဏနေခဲ့ဖူးသူတိုင်းနှင့်တူသည်။
ငါတို့ဟာအဲဒီအချိန်မှာအခက်ခဲဆုံး၊ အရေးအပါဆုံး၊ အချိန်တော်တော်များများမှာပြောပြီးပြီ။
por နာတာလီယာ ချယ်ရီ လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
ငါးပြတိုက် siphon သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြားအခြေခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါးပြတိုက်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာသည်ငါးပြတိုက်အပူချိန်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကူညီပေးမည့်အခြေခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ A) ဟုတ်တယ်…